नेपालमा राजा भन्दा काङ्ग्रेस खत्तम, काङ्ग्रेस भन्दा नी कम्युनिस्ट खत्तम — SuchanaKendra.Com
नेपालमा राजा भन्दा काङ्ग्रेस खत्तम, काङ्ग्रेस भन्दा नी कम्युनिस्ट खत्तम
सुचनाकेन्द्र संवाददाता प्रकाशित : २०७७/१/७ गते
– बिनोद लामिछाने
– ठकुरी राजाहरु सामन्ती भए भनेर गणतन्त्र ल्याएको देशमा कम्युनिस्ट राजाहरुको बर्तमान चरित्रले गणतन्त्र र कम्युनिस्टहरु प्रती मान्छेहरुको बितृष्णाको मिटर अनियन्त्रित भएर घुमिरहेको छ । सामाजिक न्यायको लागी कम्युनिस्ट भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट मान्यता आज नेपालका कथित कम्युनिस्ट भन्नेहरुबाट निकै भद्दा र मजाकको विषय बनेको छ । सगरमाथाको देशबाट कम्युनिस्ट झन्डाको अपमान, समग्र देशको लागी नै अन्तरास्ट्रिय लज्जाको विषय बनेको छ । अब यिनको यो हद दर्जाको भ्रष्टताको भण्डाफोर जरुरी छ ।
अहिले देखिएको कोरोनाको महामारीले देशलाइ केही बर्ष गाँज्ला, तर यिनिहरुबाट सिर्जित महामारीले देशलाई पुस्तेनी रुपमा गाँज्ने निश्चित प्राय छ । त्यसैले मान्नुहोस ! देशलाई कोरोनाबाट भन्दा नी कयौं गुणा खतरा यिनिहरु र यिनका वरीपरी सतहमै देखिएको माफियाहरुको डरलाग्दो चङ्गुलबाट छ ।
देशमा झन्डै दुइ तिहाइको कम्युनिस्ट बिचार बोक्ने सरकार छ । केन्द्र, निति निर्माण तह देखी स्थानिय तहसम्म सबै उनिहरुको अधिनस्त छ, तर परिणाम के छ ? फगत भ्रष्टचार, कमिसनखोरी, कानुनी उदण्ता र आर्थिक अपचलनको उन्नत प्रकारको डाेजरे ठेकेदारी , सामाजिक रुपमा अपराधिक मनोवृत्ति । समग्रमा भन्दा भयंकर प्रकारको अराजनैतिक ठेकेदारी र दलाली ।
दुनियाँ कोरोनाको महामारीसँग जुधेको छ, हाम्रोमा गलैँचा बेच्ने आफ्ना कारिन्दा ठेकेदारलाइ स्वास्थ्य सामग्री किन्न लगाएर कमिसन खान बिबादित बन्ने कथित कम्युनिस्टहरुको सत्ता छ । काङ्ग्रेसले सत्तरी बर्षदेखी निरन्तर कहिले राजाको त कहिले भारतको चाकरी गरेर देशलाइ सधैं भ्रस्टाचारको चङगुलमा र पराधिनताको खाल्डाेमा जकड्यो । कम्युनिस्ट भन्नेहरुले पाँच /सात बर्षमै काङ्ग्रेसलाइ माथ गरिसके । सामन्ती राजाहरुको पालामा अख्तियार भन्ने जिनिस नी सकृय थियो, बहालवाला काङ्ग्रेसी मन्त्री नै जेल जान्थे । अहिले त अख्तियार भन्ने जिनिस पियन, खरिदार र सुब्बा भन्दा माथी गएको सुन्न नै पाइदैन । अर्बका भ्रष्टाचार पुरै देखिने गरी कम्युनिस्ट सत्ताको तलाउमा पौडिएका छन तर अख्तियार भन्ने एउटा कथित कठपुतलीले पाँच हजारको भ्रष्टाचार समातेर “म नी देशमा छु” भनेर दुनियाँ हसाँउछ । हिजो राजाहरुको सामन्ती चरीत्र विरुद्ध “गणतन्त्र जिन्दाबाद !” भन्ने जनहरु आज तिनै राजाहरु यिनीभन्दा ठीक भन्न थालिसके । याद छ ? अझपनी यिनिहरु अझै आफुलाइ स्वघोसित अब्बल दर्जाको निर्बिकल्प राजनैतिक दल भन्न नी पछि पर्दैनन ।
सत्ताधारी मुख्य कम्युनिस्ट नेताहरु देशका माफिया र दलालहरुको चङ्गुलमा माकुराको जालोमा जस्तै बेरिएर बसेका छन, अनी तिनका कार्यकर्ताहरु नेताको फेरो समातेर हनुमानगीरीको बैतरणि तर्न ब्यस्त छन । न यिनका नेताले बिग्रेको महसुस गर्छन न त कार्यकर्ताले बिग्रेउ भनेर नेतालाई भन्ने हिम्मत गर्छन । अनी यी कम्युनिस्ट कार्यकर्ताकी र्याप गितको गायकका फ्यान ? र्याप गितका फ्यानहरुले आफ्नो आइडल मन्चमा आएर कट्टु खोलेर फालेनी निरन्तर हुटिङ गर्छन । कम्युनिस्टका कार्यकर्ता नी नेता राजनैतिक रुपले पुरै नाङिगीइसके तर छेउमा बसेर हुटिङ्ग गर्नै ब्यस्त छन । मानौँ यिनको परिभाषामा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता दबाब जागरण र आन्दोलन होइनन की फगत नेताले चढ्ने फाेल्डिङ्ग भर्याङग मात्रै हुन ।
बिरोध गर्नेलाइ अरिङ्गाल प्रवृत्ति मात्रै देखाउने कार्यकर्ताले आफ्ना नेतालाइ आधरभुत प्रश्न सोध्ने हिम्मत गर्न किन सक्दैनन ? तिम्रा नेताहरुमा अहिलेका यी आधारभुत प्रश्नको उत्तर दिने हिम्मत छ ? छ भने आउ बहस गरौं । देशका मुख्य मुख्य माफियाहरु नै तिम्रा नेताहरुका वरीपरी कसरी र किन भए ? एकपछी अर्को अर्बौंका भ्रस्टाचारहरु किन गुपचुप भए ? कम्युनिस्ट हौ भने क्रान्तिकारी भुमीसुधार खोइ ? लागु गर्न कस्ले रोक्यो ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरणको अन्त्य खोइ ? माफियातन्त्रको अन्त्य खोइ ? ब्युरोक्रेसीको आधुनिकरण खोइ ? कृषिमा आधुनिकरण खोइ ? सैनिक आधुनिकरण खोइ ? गाउँको पाखोबारीमा डाेजर मात्रै लगाएर बिकास भएको ध्वाँस दिनेहरुले राजाहरुको पालामा बनेका मुख्य राजमार्गहरु नै हेर न ? तिम्रो दाबी हाबा साबित हुँदैन ? होइन भने तिमी भन्दा हिजोका सामन्ती राजाहरु अल्ली बिशेक भन्दा पचाउने हिम्मत गर । तिमिहरु बास्तबमा काङ्ग्रेसीहरु भन्दा नी कयौं गुणा खराब भैसकेउ । तिम्रो यही र यस्तै कार्यशैली र शासनपद्दती निरन्तर भयो भने भबिस्यमा यो तिम्रो शैली नै शासन ब्यबस्था परिबर्तनको प्रमुख कारक हुनेछ । जनताहरु केबल तिम्रा भोट बैंक मात्रै होइनन र सधैं हुने पनी छैनन । सधैं बिहानीको सुरु घाम उदाएर मात्रै हुँदैन, बादल लागेर नी हुनसक्छ… अस्तु !